बेवारिसे ला*सको कसम खादै सपनाले गरिन यस्तो खुलासा आखिर किन छुटिए बाउछो*री.? sapana roka binaya jung – Onlines Time
बेवारिसे ला*सको कसम खादै सपनाले गरिन यस्तो खुलासा आखिर किन छुटिए बाउछो*री.? sapana roka binaya jung
February 5, 2021 February 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on बेवारिसे ला*सको कसम खादै सपनाले गरिन यस्तो खुलासा आखिर किन छुटिए बाउछो*री.? sapana roka binaya jung
नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको हुकुमी शासन अन्त्य गरेर उनलाई कहिले बिदा गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ । ओलीको हुकुमी कदमको विरोधमा मुखर भएको नेपालको नागरिक समाजले ओली सरकारको डन्डा, दमकल–पानीको वेग र हिरासत झेलिराखेको छ ।
विश्वभरि छरिएका नेपालीहरू यसलाई टाढैबाट हेर्न बाध्य छन् । नागरिक जुलुसमाथि ओली सरकारको प्रहरी दमनले ओलीको निरंकुशता र कुटिल मनसाय, धेरैलाई पहिलेदेखि नै थाहा भए पनि, अहिले सबैसामु उदांगिएको छ । दक्षिण एसियामै नेपालले आफ्नो नयाँ लोकतन्त्रमाथि गर्ने गरेको गौरव चकनाचुर भएको छ ।
प्रतिगमन सच्चिएन भने नेपाली लोकतन्त्रको आत्मा मानिने संघीयता, वाक् स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिहरू सिद्धिने निश्चित छ । लोकतन्त्रमाथि ओलीको यो हमला, नेपालको बलियो हुँदै गएको लोकतान्त्रिक राष्ट्रियतामाथिको आक्रमण उल्ट्याउन तीनपुस्ते नागरिक समाज लागिपरेको छ । तर सहिद धर्मभक्त माथेमाको स्मृतिस्थलमा भएको नागरिक समाजको भेलामा बौद्धिक तुलानारायण साहले भनेजस्तै, कतिन्जेल नेपालका तीन पुस्ता बारम्बार लोकतन्त्रका लागि आन्दोलित भइरहने, लडिरहने ?
यस तीनपुस्ते नागरिक आन्दोलनमा युवा छन्, जो शिक्षित हुन्, विद्यार्थी हुन् र आफ्नो भविष्यका लागि लडिराखेका छन् । नेपालको भविष्य हुन् यी । नागरिक समाजमा देश–विदेशका विश्वविद्यालयमा पढेका, आफ्ना सृजनात्मक र पेसागत उपलब्धिले पहिचान स्थापित गरेका लेखक, प्राध्यापक, बौद्धिक, कलाकार छन् जसले नेतृत्वदायी भूमिका दिइराखेका छन् ।
यस नागरिक आन्दोलनलाई पुराना पुस्ताका मूर्धन्य व्यक्तिहरूको समर्थन छ, प्रेरणा र साथ छ । किनभने यस नागरिक समाजले जुन मुद्दाहरूको उठान गरेको छ, तिनले नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य, नेपालका सबै जात–वर्ग–समुदाय र नेपालकै भविष्यसँग सरोकार राख्छन् । जनताको सार्वभौम संसद्को पुनःस्थापनामार्फत संविधानको रक्षाका साथै निष्पक्ष न्याय र स्वच्छ प्रशासन संस्थागत हुनुपर्ने माग नागरिक समाजको छ ।
उता कांग्रेस, नेकपा (नेपाल–दाहाल) सँगै जसपाहरूले पनि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भेला गरी जनता र कार्यकर्ताहरूलाई ओलीको गलत कदमबारे बुझाउन लागिपरेका छन् । साथै अदालतमा यसबारे बहस पनि चलिराखेको छ । यत्तिका समूह प्रतिगमनको विरोधमा लागेपछि लोकतन्त्र कसले मास्न सक्छ र ? तर शंका, भय, अविश्वास सर्वत्र व्याप्त छ । किनभने देशी–विदेशी सम्मिलित अनेक किसिमका षड्यन्त्र र सेटिङको अनुमान र अफवाहको बजार तातेको छ । नेपालका संविधानविद्हरू, नागरिक समाज, कांग्रेस, नेकपा (नेपाल–दाहाल) र जसपा एकातिर छन् भने ओली नेतृत्वको सरकार र पदका लागि सरकारमा सम्मिलितहरू दम्भका साथ अर्कातिर ।
तिनको दम्भको स्रोत के ? सम्माननीय ओलीको श्रोता हँसाउने खुबी मात्र ? तर उनले पनि भीड यत्रतत्र बटुलिराखेका छन् । उनले भीडलाई हँसाइराखेका छन् । दाहाल–नेपाललाई दुई–तीन महिनामा नागरिक समाजको स्तरमा झारिदिने धम्की दिन्छन् उनी । सुनेर उनको सरकारले भेला पारेको भीड हाँस्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले एउटा भेलामा भनेजस्तै विवेकलाई बन्धक बनाएर एक व्यक्तिको हर क्रियाकलापमा समर्थन गर्ने लम्पट कार्यकर्ता भएसम्म प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दैन ।
प्रह*रीले प्रचण्ड समुहका पुर्वमन्त्रीको टाउँको फु*टाइदियो, २७ राउण्ड ह’वाई फा’यर, ड’रलाग्दो झ’डप !
Exclusive ला’हुरेको श्री*मती को ना’ठो बल्ल मिडियामा हेर्नुस् यसरी भन्छ वास्तविक यस्तो रहेछ
टिका सानुको गुरुको अन्तत पुरा भयो सपना,पहिलो गीतनै टिकासंग रेकर्ड भएपछि खुसि हुदै मिडियामा|Tika sanu
January 11, 2021 January 11, 2021 onlinestime
गरिबका छोरालाई पाइलट बनाउने नगरपालिका (सम्मान स्वरुप एक सेयर गराै)
हे भगवान नेपालमा फेरि अर्को बज्र’वात,३ दिन देखिको भारी बर्षाका कारण ३० घर बगायो,सयौ घर डु’वानमा (भिडियो हेर्नुहोस)